Liiska ugu Fiican Haibane Renmei Xigashooyin Xusuusnow - Kale
Liiska ugu Fiican Haibane Renmei Xigashooyin Xusuusnow
Haibane Renmei xigasho mudan in lala wadaago jilayaasha:
Haibane Renmei waa taxane khiyaali / sir ah oo uu soo saaray Radix. Iyada oo jilayaal u eg malak
Haddii aad tahay qof jecel taxanahan qotoda dheer xigashooyinkani waa kuwo xusuus mudan oo mudan in lala wadaago macnaha ay hayaan awgood.
1. Xigasho Rakka
“Meel, taasi ma ahan, meel aanan xusuusan karin, waxaan ku waashay fikradda ah inaan keligey ahay. Waxaan u maleeyay in qofna danayn doonin, ama xitaa ii xiisi doonin haddii aan ka libdho dunida korkeeda. Waxaan doonayay inaan waayo. Markaasaan ku riyooday anigoo cirka ka soo dhacaya. Kaliya waxaan xasuustaa in shimbirta riyada igu jirtay aniga, iyo in shimbiruhu uu yahay qof qaab shimbir u eg, isku dayaya inuu dib iigu yeero. Hadda waxaan ogahay inaanan waligey keligey aheyn. ” - Rakka
2. Xigasho Reki
“Magaaladaan waa xabsi aan ku jiro. Darbiyada ayaa astaan ​​u ah geeridayda. ” - Reki
Ma jiraan wax weligood jira. Wax walba goor dhow ama goor dambe ayey dhammaanayaan. Sida ay tahay. Sababtoo ah hadda waa kaliya hadda. Waqtigana ... aad buu qaali u yahay. ” - Reki
“Tani waa riyadayda cocoon. Riyo-qawadeedka i dhibaysay jiritaankayga adduun. Waxaan ku socday wadadan. Waxaan xasuustaa dabaylo qabow oo ku mudaya dhabankayga oo qoyan ilmada. Waxaan ka maqlay dhawaq meel fog. Laakiin aad baan ugu daalay fikir. Waxaan xasuustaa anigoo raba inaan noqdo dhagax. Dhagax aan xanuun dareemayn. Ama murugo. ” - Reki
3. Xigasho Kuu
Maskaxdayda gudaheeda, waxaa jira koob qurux badan. Koob aad u qurux badan, oo cad. Dhibco yaryar ayaa ku sii dhacayay iyada: 'faleebo, faleebo, faleebo', tartiib tartiib laakiin joogto ah, maalin kasta. Maantana, waxaan dareemay in koobku uu ugu dambayntii si buuxda u buuxsamay. ” - Kuu
4. Xigasho Isgaarsiinta Renmei
Inaad ogaato dembigaagu inuu dembi lahayn. - Xiriiriyaha Renmei
“Laga yaabee inay tani tahay waxa loola jeedo in dembi lagu xidho. Inaad ku dhex wareejiso isla goobada, oo aad raadiso halka uu dembigu ku yaallo, oo mararka qaarna aad lumiso jidka looga baxo. - Xiriiriyaha Renmei
Sawir muuqaal ah: xigasho
18+ Quotes Jaceyl Live Sunshine Quotes
19+ Xigasho Junjou Romantica oo macno leh
anime sida kalgacalka franxx